Yesaia 63 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Yehowa betua aman no so ka (1-6)
Yehowa daa n’adɔe adi tete (7-14)
Ahonu mpaebɔ (15-19)
63 Hena na ofi Edom+ reba yi,Nea ɔhyɛ ataade a ɛhyerɛn* fi Bosra+ reba,Nea n’ataade yɛ fɛ, Na ɔde tumi mmoroso reyi akyẽa yi?“Ɛyɛ me, Nea ɔkasa trenee mu, Nea ɔwɔ tumi kɛse a ɔde gye nkwa no.” 2 Adɛn nti na w’ataade ayɛ kɔɔ,Na adɛn nti na w’ataade te sɛ obi a otiatia amoa a wokyĩ nsã wom mu yi?+ 3 “Me nko ara na mitiatiaa amoa a wokyĩ nsã wom no mu. Ná ɔmanfo no mu biara nka me ho. M’abufuw mu na mitiatiaa wɔn so,Na m’anibere mu na mitiatiaa wɔn so.*+ Wɔn mogya bɔ petee me ntaade muMaa me ntaade nyinaa mu sɛee. 4 Ɛda a mede betua bɔne so ka no,+ masi ho gyinae wɔ me komam,Na afe a mede begye me nkurɔfo no adu. 5 Mehwɛe, nanso na ɔboafo biara nni hɔ;Ɛyɛɛ me nwonwa sɛ obiara ammɛboa. Enti me basa na egyee me nkwa,*+Na m’ankasa m’abufuw na ɛboaa me. 6 Mitiatiaa amanaman so m’abufuw mu,Mema wɔnom m’abufuw bowee,+Na mihwiee wɔn mogya guu fam.” 7 Mɛka Yehowa dɔ a enni huammɔ akyerɛ,Nneɛma a Yehowa ayɛ a ɛfata ayeyi no.Mɛka akyerɛ, esiane nea Yehowa ayɛ ama yɛn no nyinaa nti,+Nneɛma pa bebree a wayɛ ama Israel fi,Sɛnea ne mmɔborɔhunu ne ne dɔ bebrebe a enni huammɔ te no. 8 Na ɔkae sɛ: “Wɔyɛ me man ampa, mma a wɔrenni huammɔ.”*+ Enti ɔbɛyɛɛ wɔn Agyenkwa.+ 9 Bere a wɔn ho hiahiaa wɔn no, ne ho hiahiaa no.+ Na ɔno ara ne bɔfo* gyee wɔn.+ Ne dɔ ne n’ahummɔbɔ nti, ogyee wɔn,+Na ɔmaa wɔn so turuu wɔn tete mmere no nyinaa.+ 10 Nanso wɔtew atua+ na wɔmaa ne honhom kronkron no werɛ howee.+ Enti ɔdan bɛyɛɛ wɔn tamfo,+Na ɔko tiaa wɔn.+ 11 Na wɔkaee tete mmere no,N’akoa Mose bere so: “Nea oyii wɔn ne ne nguan so ahwɛfo+ fii po mu no wɔ he?+ Na nea ɔde Ne honhom kronkron hyɛɛ ne mu no wɔ he?+ 12 Nea ɔmaa Ne basa a ɛwɔ anuonyam no dii Mose nsa nifa so kɔe,+Na ɔpaee nsu no mu wɔ wɔn anim+De gyee din+ a ɛwɔ hɔ daa no wɔ he? 13 Nea ɔma wɔnantew nsu a ɛrebu fa so* muSɛnea ɔpɔnkɔ nantew sare so,Na wɔanhintiw no, ɔwɔ he? 14 Sɛnea mmoa sian kɔ asaasetraa so kɔhome no,Saa ara na Yehowa honhom ma wɔhomee.”+ Saa na wudii wo man animDe gyee din a anuonyam wom maa wo ho.+ 15 Fi soro hwɛ,Fi wo tenabea kronkron a ɛwɔ anuonyam* hɔ na hwɛ. W’ahokeka ne w’ahoɔden kɛse,W’ayamhyehye+ ne wo mmɔborɔhunu+ no wɔ he? Woatwe afi me ho. 16 Wone yɛn Agya;+Ebia Abraham nnim yɛnNa ebia Israel renkae yɛn,Nanso wo, Yehowa, wone yɛn Agya. Wo din ne yɛn Gyefo+ fi tete. 17 O Yehowa, adɛn nti na woma yɛman fi w’akwan so? Adɛn nti na woma yɛn koma pirim na yensuro wo yi?+ Wo nkoa nti san bra,Mmusua a wɔyɛ w’agyapade nti.+ 18 Ebedii wo man kronkron no nsam bere tiaa bi. Yɛn atamfo atiatia wo tenabea kronkron so.+ 19 Bere tenten ni, yɛayɛ sɛ nnipa a wunnii yɛn so da,Te sɛ wɔn a wɔmfaa wo din mfrɛɛ wɔn da.
^ Ebetumi nso akyerɛ, “ɛbere kɔɔ.”
^ Anaa “mewɔw wɔn.”
^ Anaa “de nkonim brɛɛ me.”
^ Anaa “wɔrenni atoro.”
^ Anaa “ɔbɔfo a ogyina n’anim; n’anim bɔfo.”
^ Anaa “nsu a emu dɔ.”
^ Anaa “fɛfɛɛfɛ.”